QS တစ်ယောက်အကြောင်း
Thread: QS တစ်ယောက်အကြောင်း
06-07-2008 10:23 AM #1
[quote author=lamin_ngal link=topic=52.msg425#msg425 date=1209806793]
ဗဟုသုတ ရတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်အကို။
လမင်းကလေ ငယ်ငယ်က Electrical မယူပဲ Cival ယူဖို့ စဉ်းစားသေးတယ်။ နောက်မှ မိန်းခလေးဆိုတော့ ပင်ပန်းခံနိုင်ပါ့မလားဆိုပြီး မယူတာ။
ဒီနေရာမှာ သင့်တော်တယ် ထင်လို့ Quote ပြီးရေးလိုက်ပါတယ်..
မိန်းခလေးတစ်ယောက် Civil ဖြစ်ပြီးး လုပ်လို့ ရတဲ့အလုပ်တွေ အများကြိး ရှိပါတယ် .. တစ်ချို့အလုပ်တွေ ဆိုရင် မိန်းခလေးနဲ့ ပိုတောင် ကိုက်ညီပါသေးတယ်။ အခု ကျွန်တော် လုပ်နေသလို မျိုးပေါ့.. ဒီနိုင်ငံမှ ဆိုရင် QS တော်တော် များများက မိန်းခလေးတွေ ချည်းပါဘဲ.. အလုပ်ကလည်း တစ်နေကုန် ရုံးမှာထိုင်ပြီး တင်ဒါတွေ တွက်မယ်.. Supplier တွေကို connect လုပ်မယ်.. ဒါတွေ ပါဘဲ..
အဲတစ်ခုရှိတာကတော့ format ပါ။ တစ်နိုင်ငံ နဲ့ တစ်နိုင်ငံ သုံးတဲ့ အယူအဆတွေ မတူကြသလို့ QS တစ်ယောက် တွက်ထုပ်လိုက်တဲ့ ပုံစံတွေ ကလည်း မတူကြပါဘူး။ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှာတုန်းက ဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးမှာ bill ဆွဲတဲ့ အခါမှာ ဆောက်လုပ်ရေး ငွေစာရင်းက ထုပ်ပေးထားတဲ့ form-2 form-3 ကိုသုံးပြီး Estimate/ Bill ဆွဲရပါတယ်။ ဒီရောက်တော့ format တွေပြောင်းကုန်ပါတယ်။ သူနိုင်ငံမှာ သုံးတဲ့ format ကိုပြန်ပြီး လိုက်ရပါတယ်..။ တော်တော် များများကတော့ ISO ကို Refrance ယူပြီး အဆင်ပြေအောင် နည်းနည်း ပြန်ပြင်ပြီး သုံးကြပါတယ်။ တွက်ထုတ်တဲ့ ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးတည့်သလို့ ယူသုံးသွားကြတာပါ။ အဓိကတော့ ကိုယ့် ရေးဆွဲထားတဲ့ Estimate or Claim က တစ်ခြားသူ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောပေါက်လွယ်အောင် ပါဘဲ............
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. နောက်အချိန်ရခဲ့ရင် .. နမူနာ format တွေကို softcopy နဲ့ တင်ပေးသွားပါ့မယ်......
The Following5Users Say Thank You to William Thet For This Useful Post:
January Gal, june, nyeinmoewai, winwinmaw.mdy, ကိုလင်း
06-07-2008 11:46 AM #2
ပြန်စာ ->ှQS တစ်ယောက်အကြောင်း
ကိုMu_Si ရေ ၀င်ဝင်ခြင်းမှာပဲ ဆွေးနွေးပေးတာ ကောင်းတယ်အစ်ကိုရေ..
ဆက်လက်မျှဝေပါဦးနော် အစ်ကိုရဲ့  ပိုစ့်တွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှု့ နေပါ့မယ်...
ဖိုရမ်အတွက် အခုလို အကျိုးပြုပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ....
ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိလို့ ဖြစ်ဖြစ် မေးစရာရှိလို့ဖြစ်ဖြစ့် hein@myanmarengineer.org ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ..
06-07-2008 01:15 PM #3
ပြန်စာ -> QS တစ်ယောက်အကြောင်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဟိန်းရေ.. ကျွန်တော်လည်း အချိန်ရရင် ထပ်တင် ပေးထားပါ့မယ် အခုတော့ တက်သုတ်ရိုက်ပြိး ပြေးလိုက်အုန်းမယ် ဂျာ..
06-09-2008 05:34 PM #4
အစက အသုံးပြုတဲ့ form-02/ form-03 တွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး Estimate ဘာသာသင်တုန်းက ဆွဲခဲ့ရတဲ့ ဇယားလေးတွေ ပါဘဲ.. form-02 ကတော့ Quantity တွေကို တွက်ထုပ်တာပါ။ ပြီးမှ form-03 မှာ ပြန်ပြိးတော့ rate တွေနဲ့.. amount ကိုပြန်တွက်ထုတ်တာပါ.။ ဆောက်လုပ်ရေး မှာ သုံးတာပါ ရိုးရှင်းပေမယ့် အခြေခံကျပါတယ်..။
The Following User Says Thank You to William Thet For This Useful Post:
08-11-2008 05:03 PM #5
ကေဵးဇူးတင်ပၝတယ်ဒီဖိုရမ်လေးကို စတင်ပေးတဲ့ အကိုအားလုံး ဗဟုသုတဝေမဵပေးတဲ့အင်ဂဵင်နီယာအားလုံး တိုးတက်အောင်္ဘမင်ကြပၝစေ
က႘န်တော်က Electronics Engineer ပၝ တက္ကသိုလ်တခု ကို အလုပ်ဝင်လုပ်ရာကနေ တာဝန်အရ civil work မဵားပၝလုပ်ရတော့ အတော်လေ့လ္ဘာပီး လုပ်ရပၝတယ် ဘယ်သူရဲႛ knowledge share္ဘဖစ်္ဘဖစ်ကေဵးဇူးတင်တန်ဖိုးထားပၝတယ် ဆက်လက်္ဘပီးဝေမဵပၝအုံး shwenai@gmail.com
09-28-2008 01:00 PM #6
အခုလုပ်နေတဲ့ ပရောဂျက်က ဒိလကုန်ဆို ပြီးဘိလေ အဲဒီတော့ ဒေတာတွေ ပေးလို့ရပါဘီ။ မပြီးခင်တင်ပေးလိုက်ရင် တော်ကြာရောင်းချားတယ် ပြောမှာဆိုးလို့ အခုမှ တင်ပေးတာပါ။ ကျွန်တော် လုပ်နေတဲ့ ပရောဂျက်ရဲ့ လစဉ် Claim လုပ်တဲ့ ဖိုင်တစ်ခုပါ။ july ကဟာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖိုင် format တွေကို လေ့လာကြည့်ဖို့ပါဘဲ။ ကျန်တဲ့ ထွေထွေထူးထူးတော့ မရှီပါဘူး။ တစ်ကယ်လို့ အသုံးပြုမယ့် သူတစ်ယောက်ယောက် format တစ်ခု ရသွားတယ်ဆိုရင် ဘဲ.. တင်ရကြိုးနပ်ပါဘီ...
Mu_Si (Can&#039;t Catch Group.)
09-28-2008 04:09 PM #7
လက်တွေ့မှာလုပ်နေတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကိုမူးစိရေ..
Civil သမားတွေအတွက် လိုအပ်လာရင် အသုံးတည့်မှာပါ..
EXCEL သုံးထားတဲ့ပုံစံကိုက တော်တော်မြှင့်နေပြီ။
10-23-2008 08:04 PM #9
ဒိ post အ တွက် ကျေး ဇူး အများကြိး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။ ဆက် လက် မျှ ဝေ ပေး ပါ အုန်း ခင် ဗျာ..။
10-24-2008 08:59 PM #10
ကျွန် တော် ဒီ post အ တွက် ပုံလေး များ ရ နိူင် မ လား ခင် ဗျာ..။ အ မှား အ ယွင်း ပါ ရင် ခွင့် လွတ် ပါ ခင် ဗျာ..။
Quick Navigation Civil Engineering Top